Umbhishobhi wamasheshi nethemba kubazalwane - Ilanga News
Home Izindaba Umbhishobhi wamasheshi nethemba kubazalwane
Umbhishobhi wamasheshi nethemba kubazalwane
Iyamkhathaza eyezidakamizwa, izifo nokufeyila kwemishado
KUGQAME uthando lokusebenzisana nabantu kuMbhishobhi Vikinduku Mnculwane webandla lamaSheshi esifundeni saseZululand, osanda kuqokelwa ukuhola lesi sifunda esikhulukazi njengoba sinamapherishi awu-50 anamagatsha
awu-285 ngaphansi kwaso.
UMbhishobhi Mnculwane (osesithombeni) uthathe lesi sikhu-ndla sokwalusa le ngxenye yomzi-mba kaKrestu kuMbhishobhi Monument Makhanya, ungumbhi-shobhi ka-15 ukutshalwa kulesi sifunda selokhu ibandla laba khona kuleli.
UMbhishobhi Mnculwane uqo-kwe ngoLwesine olwedlule mhla ka-20 emhlanganweni wokhetho lobuholi obuseMelmoth.
Engxoxweni ekhethekile abe nayo neLANGA uMbhishobhi Mnculwane uthe, yize esathukile ngokunikwa umsebenzi weNkosi omkhulu kangaka kodwa usekulu-ngele ukuwenza ngokusizwa nguNkulunkulu.
“Kanginakho engingathi ngiha-mba ngikuthwele ngojosaka engizokwenza kodwa ngizolawu-lwa ngabantu. Ngingumuntu okho-lelwa kakhulu ekusebenzisaneni nabantu.
“Isinqumo noma ushintsho engizolwenza luzoncika ekutheni sithe uma sixoxa nabo baphakamisani, bese siletha izixazululo kulokho ngoba izinkinga zedayosisi neda-yosisi kazifani.
“Engingathanda ukuba kuhlale kuhleli kubefundisi abazoba ngaphansi kwami, wukuthi kumele bahlale bekhumbula ukuthi aba-ntu beze esontweni bezothulula imithwalo ebasindayo. Imithwalo esibhekene nayo esikhathini samanje okuyizidakamizwa,
ukufeyila kwemishado nezifo.
“Abantu basuke belindele ukuba thina njengabefundisi sibathwalise yona ngomkhuleko, siphinde sibaqinise ukuthi konke kuzodlula,” kusho uMbhishobhi Mnculwane.
UMbhishobhi Mnculwane ungo-wokuzalwa eMdwebu, eNtaba-mhlophe, eMtshezi. uthi yize ubizo lobufundisi lwaziveza enza unyaka wokugcina eCwaka College of Agriculture, kodwa akazange akujahe ukulaxaza ukufunda, walinda waze wazuza iziqu zakhe.
Uthi kwathi uma esesebenza njengomeluleki wezolimo, kwayima ewushiya phansi umsebenzi, wafundela ubufundisi eSt Paul Theological School, eGraham-stown.
Ngemuva kokuphothula iziqu usebenze eShowe Cathedral, eNquthu, eGigindlovu, eDundee, eMgungundlovu naKwaMashu. Uthi ngemuva kwalokhu ube eseba ngumfundisi ozondlayo, waphuma wafuna umsebenzi.
“Ngisebenze eHhovisi likaNdu-nankulu KwaZulu-Natal, ngibhe-kelela ezamasiko. Ngithe uma ngiphuma khona ngasebenza njengosekela mqondisi enhlanganweni Amafa aKwaZulu, ngabuya ngazoqhubeka nomsebenzi weNkosi ngokugcwele ngasebenzela emi-
shini yaseMlazi njengoba sengizo-suka khona nje sengiya eZululand.
“Engikubongayo wukwesekwa wumndeni wami, (ikakhulukazi) umama wasekhaya uMaNkwanyana kukho konke engikwenzayo. Ngeke ngibakhohlwe nabantwana bethu ababili esinabo, abangakaze bakhononde ngempilo engiyiphilayo yokuhlala ezindaweni ezahlu-kene ngenxa yomsebenzi wobizo,” kusho uMbhishobhi Mnculwane.
Previous articleAbalandeli bakhalise uPitso
Next articleUsizi lomndeni wabawu-37 ompintshana emxhasweni